Tantara an-tsary: nodimandry Rajaomahefarison Jocelyn | NewsMada
Tantara an-tsary: nodimandry Rajaomahefarison Jocelyn
Mpanao tantara an-tsary nanana ny lazany Rajaomahefarison Jocelyn. “Joce”, hoy ny namany akaiky. Tena hainy tanteraka ny mambabo ny fon’ireo izay mahita ny sanganasany amin’ny alalan’ny talentany.
Misaona ny tontolon’ny tantara an-tsary sy ny hosodoko. Nodimandry ny 13 marsa, teo amin’ny faha-60 taony Rajaomahefarison Jocelyn. « Andrarezin’ny tantara an-tsary malagasy », io no iantsoan’ny mpitia sy ny mpanao tantara an-tsary azy. Anisan’ny nanasongadina ny talentany ny « Koditra », tantara an-tsary anisan’ny be mpanjifa indrindra rehefa navoaka boky, nandritra ny fotoana nampiroborobo fatratra ny tantara an-tsary, teto Madagasikara (Taona 1985 – taona 1991). Tany ho any amin’ny taona 2000, niverina namoaka azy io indray izy. Tantara an-tsary navoakany ihany koa ny « Jery ». Amin’ny ankapobeny, saika tantara an-tsary ahitana fifanandrinana sy fahaizana haiady no tena namoahany ny talentany.
Ny solaitra sy ny tsaoka no sakaiza akaikin’i Jocelyn, raha mbola teo amin’ny faha-6 taony. Zary fahazarana ho azy ny manao sary amin’ireo. Nahavariana olona maro ny zava-bitany. Nisongadina avy hatrany ny talenta fanaovana sary tao aminy. Taty aoriana, navadiny ho fanaovana sary ireo kahie novidiana hoampiasaina any am-pianarana. Vao mainka nisongadina bebe kokoa hatrany ny talentany. Nahatsapa sy nahita izany avokoa ny mpiara-mianatra taminy sy ireo mpampianatra azy. Nitondra vokatra tsara ho azy io fampianaran-tena io. Nahazo fankasitrahana tamina fifaninanana ny sanganasany raha mbola vao 13 taona monja i Jocelyn… Maro ny edisiona efa niara-niasa taminy.
Anio 16 marsa, amin’ny 8 ora maraina, no hoentina miala ao amin’ny tranony ao Andrazara ny nofomangatsiakany. Any Mandivato kosa no hanatanterahina ny fandevenana. Miray fiononana feno ho an’ny fianankaviana manontolo ny Gazety Taratra.